Yurub oo ka hadlaysa hubka Suuriya - BBC Somali - Warar
Yurub oo ka hadlaysa hubka Suuriya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 Maarso, 2013, 10:31 GMT 13:31 SGA
Wasiirada Arrimaha Dibadda ee Yurub.
Britain iyo Faransiiska, ayaa maanta dib u bilaabaya wadahadal ay isku dayayaan in midowga yurub ay cunaqabataynta ka qaado Suuriya, si loo hubeeyo mucaaradka.
Cunqabataynta oo ku eg bisha May, waxay noqon doontaa waxa ugu wayn ee looga hadlayo shirka Wasiirada Arrimaha Dibadda ee ka dhacaya Ireland.
Waddamo kale oo ku jira Midowga Yurub ayaa ku raacsan Faransiiska iyo Britain in hub la siiyo mucaaradka. Laakiin Raiisalwasaaraha Jarmalka Angela Merkel, ayaa sheegtay in waddamada kale ee Yurub ay qabi karaan fikrad ka duwan tan Faransiiska iyo Britain.
Bariga Dhexe Xisbullah oo laga dilay taliye militeri
Kenya oo damaanad u diiday 4 Soomaali
Xisbullah oo laga dilay taliye militeri
Eritreyan lagu jirdilo dalka Masar